MinnyoMaharsan: ပဲရစ်ကို တူးဖော်ခြင်း
ပဲရစ်ကို ရောက်ခဲ့သည်မှာ သုံးရက်တာ ကြာခဲ့ပြီ။ ပဲရစ်မြို့  မြေအောက်ရှိ မြို့ တော်တစ်ခုပမာ ရှုပ်ထွေးလှသော မြေအောက်ဘူတာမှတ်တိုင်များကို Tourism info point မှပေးသော ရထားလမ်းကြောင်းပြမြေပုံ သုံးလျှက် အတန်အသင့် အခက်အခဲမရှိ သွားနိုင်ပြီ။ ရောက်စနေ့မှာ Charles de Gaulle လေဆိပ်မှ အွန်လိုင်းကြိုငှားဖြင့် ငှားရမ်းထားသော Garden Hotel သို့ အသွား Gard du Nord မှတ်တိုင်မရောက်မှီ အဖြစ်အပျက်တခုက ပဲရစ်မှ ရှင်သန်မှု့  စရိုက်တချို့  အကြောင်းသိခွင့်ရခဲ့သလို ရန်ကုန်မှာနေစဉ် Bus စီးခဲ့ရစဉ် အိပ်ကပ်ကို မကြာခဏစမ်းကြည့်မိ သလိုမျိုး အစစအရာရာ သတိထားခဲ့ရသည်။ ပြင်သစ်စကား (ဒီနေရာတွင် ပြင်သစ်စကားဟုထင်သည်) ဖြင့် အထိတ်တလန့် အော်သံကို ကြားပြီးနောက် ကျွန်တော်တို့ ရ ထားပေါ်တက်ခါစက နောက်နားကပ်လာသော နီဂရိုးလူငယ် နှင့် လူဖြူ လူငယ် နှစ်ဦး ရုတ်တရက်ဆင်းပြေးသွားတာ တွေ့လိုက်မိသည်။ တဆက်တည်း အလုခံလိုက်ရသော ကောင်မလေးလည်း အော်ဟစ်ရင်း ခုန်ဆင်းသွားတာ တွေ့လိုက်ရသည်။ ရထားကထွက်နေပေပြီ။ မည်သူမျှ ဆင်းလိုက်သည်ကိုလည်း မတွေ့။ ပြတင်းပေါက်မှ ခေါင်းပြူကြည့်ကြတာလောက်သာ တွေ့သည်။ ကြိုဆိုပုံ သင်းလိုက်ပါဘိ ပဲရစ်။ ဒိနောက် ပထမဆုံးအကြိမ် ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက်ခရီးစဉ်အတွက် စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မိသည်။ အနားကပ်လာသူမှန်သမျှ မသင်္ကာစိတ် ဖြင့် ကြည့်မိသည်။ ခွင့်လွှတ်တော်မူကြပါကုန်။ ကံကြီးပေလို့ပဲ သူမကိုင်ထားသော လက်ပွေ့အိတ်ထဲမှာ ပတ်စ်ပို့၊ အပြန်လေယာဉ်လက်မှတ်၊ ပိုက်ဆံအိတ် အရေးကြီးတာ အကုန်ပါသည်။ ခရီးဆောင်အိတ်ကြီး နှင့် ကျွန်တော်ခံနေ၍သာ သူတို့ လုသွားခြင်းကို ရုတ်တရက် မခံလိုက်ရခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်တော့်နောက်ဖက်ခုံတွင်ထိုင်နေသော ပြင်သစ်သူမလေးတော့ ပါသွားရှာသည်။ ဂျာမနီတွင် ခါးပိုက်နှိုက် အန္တရာယ် မရှိသလောက်ရှားပါးစွာဖြင့် အေးအေးလူလူ နေမိသောအလေ့အကျင့် အလျှင်အမြန်ပြန်ဖျောက်ရသည်။ ပဲရစ်လမ်းညွှန်ဆိုင်းဘုတ်များဖြင့် မရင်းနှီးသေးသောကျွန်တော် ခရီးဆောင်အိတ်တကားကားဖြင့် လိုချင်သော ထွက်ပေါက်ကို ရုတ်တရက်ရှာမရ။ သယ်သွားတာက ၂၀ ကီလိုကျော်၊ ထွက်ရမယ့်ထွက်ပေါက်ကလည်း စက်လှေကားကမရှိ၊ မြေအောက်လမ်းတွေကလည်း ကြွက်တွင်းတွေလို ရှည်လျားပြီး များလှပါဘိတောင်း။ ပေတရာကျော် လောက်နက်တဲ့ အထဲမှာ ရထားတစင်းနဲ့ တစင်း ပြောင်းဖို့ကလည်း မြေအောက်တင် လမ်းလျှောက်ပြီး ပြောင်းခဲ့ရတယ်။ ဂျာမနီမြေအောက် ရထားတွေက အဲသလောက်မရှုပ်ဘူး မနက်ဘူး။ ကြီးမားတဲ့ အဆောက်အအုံတွေ မြေပေါ်မှာဆောက်ထားပြီး အောက်မှာ ”ခြအုံ”လို ရှုပ်ထွေးလှတဲ့ ဒီလိုတွင်းတွေတူးထားနိုင်တဲ့ နည်းပညာကိုတော့ လိုချင်မိပါရဲ့ ။ ကမ္ဘာ့ အကြီးဆုံး မြေအောက်စစ္စတမ် တစ်ခုလို့တော့ အင်တာနက်မှာ ရှာတွေ့လိုက်မိတယ်။ ပဲရစ်ရဲ့ မြေအောက်မြို့တစ်ခုပမာရထားလမ်းတွေက ရှုပ်ထွေးလွန်းလှတယ်။ ရထားလမ်းတွေက တချို့ နေရာတွေဆို သုံးထပ် လေးထပ်လောက်အလွှာလိုက် ဆောက်ထားပုံရတယ်။ Rock Mechanics ပညာရပ်မှာ အောင်မှတ်တောင် ခြစ်ကုတ်ရအောင် မနည်းသင်ခဲ့ရတဲ့ ကျွန်တော့်အဖို့ ဘယ်လိုတူးမလဲဆိုတာ လိုက်မမှီပါဘူး။ Metro line 14 lines နဲ့ RER line5lines မှာ ပြေးဆွဲနေတဲ့ ရထားပေါင်းများစွာက လာတဲ့ အသံလှိုင်းတွေကို ထိန်းဖို့ ဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်။ လေ၀င် လေထွက် လေသန့်စင် စနစ်တွေ။ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာတွေ လိုက်မမှီလို့ ထားလိုက်ပါတော့။
မြို့ ကြီးဖြစ်တာနဲ့ အညီ အစစ အရာရာ သွားသတိလာသတိ ရှိဖို့ သတိထားသင့်တဲ့နေရာတွေ မှာ ကင်မရာနဲ့ ၂၄ နာရီစောင့်ကြည့်နေတာတွေရှိတယ်။ Pigalle, Chatelet, Bastille, Republique စတဲ့ မှတ်တိုင်တွေက သတိထားသင့်တဲ့ နေရာတွေလို့ဆိုတယ်။ နောက်သုံးနေရာကို လျှောက်လည်တိုင်းဖြတ်နေရတော့ မျက်ခုံးက ခပ်လှုပ်လှုပ်ပါပဲ။ လူမည်း နိုင်ငံတွေအတော်များများဟာ ပြင်သစ်စကားကို ဒုတိယဘာသာအနေနဲ့ သင်ကြလို့လားတော့ မသိဘူး နေရာတိုင်းနီးနီးမှာ လူဦးရေ သုံးချိုးတစ်ချိုးလောက် လူမည်းတွေ တွေ့နေရတယ်။ လမ်းဘေးမှာ အမှတ်တရပစ္စည်းတွေ လိုက်ရောင်းနေတာလည်း သူတို့ပဲ၊ Church ကျောင်းတွေမှာ ချည်မန်းကွင်းဆိုပြီး လက်အတင်းလိုက်စွပ်လို့ ပိုက်ဆံတောင်းတာလည်း သူတို့ပါပဲ။ ရောက်စမှာ ဟိုတယ် Reception က ပုဂ္ဂိုလ်က လူမည်းဖြစ်နေတော့ အနည်းငယ်စိတ်ပျက်သွားမိတာတော့ အမှန်ပါ။ မကြာခင်လေးကမှ ရထားပေါ်မှာ ပိုက်ဆံလုသွားတာ လူမည်း အမျိုးသားမို့ စိတ်ကစွဲနေတာရယ်။ ဒီဆရာသမားရဲ့  ရူတည်တည်ဆက်ဆံမှုတွေ၊ ပြောပုံဆိုပုံနေပုံထိုင်ပုံက နည်းနည်း ကလေကချေ ဆန်သလိုဖြစ်နေတာတွေက ရောက်စနေ့မှာ နည်းနည်း စိတ်ကသိကအောက်ဖြစ်မိတာ။ ၅ မိနစ်နီးပါးမှာ ရထားတစ်စီးထွက်နေတာတောင် လူတွေက ပြွတ်သိပ်ကြပ်နေတယ်။ တစီးနဲ့ တစ်စီးကို အချိန်မကုန်ပဲ ပြောင်းစီးနိုင်အောင် လူတွေ ပြေးလွှားသွားနေကြတယ်။ စီးနေတဲ့ လူအချင်းချင်း မှတ်တိုင်မေး ပြီးစီးဖို့တော့ စိတ်မကူးနဲ့ ဖြေဖို့ သူတို့မှာ အချိန်မရှိကြဘူး။ အလွယ်ဆုံးနဲ့ အဆင်ပြေဆုံး ကိုယ့်ဟာကိုယ် ရှာစီးပဲ။ ဒီလိုရှာစီးဖို့ ဘူတာက info point မှာ ရထား လမ်းကြောင်း ဘူတာနဲ့ ခရီးသွားတွေ လာလည်လေ့ရှိတဲ့ Monuments များပြတဲ့ မြေပုံ တောင်းထားလိုက်ရင်ပြီးပြီ။ အနောက်နိုင်ငံ တွေရဲ့  မီးရထားလမ်း ကားလမ်းတွေ စနစ်လိုပါပဲ၊ zone ခွဲပြီး သိထားဖို့တော့လိုတယ်။ ကျွန်တော်တို့တည်းတဲ့ ဟိုတယ် က မြို့ လယ် ၁ ဇုံ ထဲမှာ ရှိသမို့ ဒုတိယ တစ်ရက်ကိုတော့ ၁ ဇုံ ကနေ ၃ဇုံ အတွင်းသွားလို့ရတဲ့ Paris visit လက်မှတ် တစ်ယောက်တစ်စောင်စီဝယ်ထားလိုက်တယ်။ တစ်ယောက် ၉ ယူရိုနဲ့ ၁၈ ယူရိုလောက်တော့ ကုန်သွားတယ်။ Eiffel tower, Louvre Museum, Arc de Triomphe, Opera Garnier, Invalides, Notre-Dame စတဲ့ Monuments အများစု နဲ့ Museum အများစုဟာ ၁ ဇုံ အတွင်းမှာ ကျလို့ 1 day- 1 to3zone ticket နဲ့ တရက်မှာ အတော်အဆင်ပြေပါတယ်။ လတစ်လရဲ့  အစဆုံး အပတ်မှာ တနင်္ဂနွေ တရက် Museum Fee ကင်းလွတ်ခွင့် ရတာဆိုတာကို အစ်ကိုမိသားစု တစ်စုကပေးတာ တန်ဖိုးရှိတဲ့ သတင်းပါ။ ၄ ရက်တာ ဟိုတယ်အခန်းယူထားပြီး လေယာဉ် အသွားအပြန်ခရီးဖြတ်ထားတဲ့ ခရီးစဉ်ထဲမှာ ပထမဆုံး တနင်္ဂနွေတရက်ကို ထည့်သွင်းယူထားခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနေ့က မပြန်ခင် အရင်တရက်ပါ။ ကမ္ဘာကျော် မိုနာလီဇာ ပန်းချီကားရှိတဲ့ Louvre Museum ၀င်ကြေးကတင် ၁၀ ယူရိုလောက်ရှိပါတယ်။ နှစ်ယောက်စာ ၀င်ကြေးမကုန်ခဲ့တာနဲ့ ပြတိုက် ကက်တလောက်လိုမျိုး Museum collection တွေကို ဓါတ်ပုံနဲ့ သမိုင်းကြောင်းကို ဖော်ပြတဲ့ Visit Guide တစ်အုပ်ကို ၁၇ ယူရိုပေးဝယ်ယူခဲ့တယ်။လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီ ရဲ့  မိုနာလီဇာပန်းချီ ၊ ဗီးနပ် ရုပ်တုအပြင် နပိုလီယံ Code Law လို့ ဥရောပမှာ နာမည်ကျော်တဲ့ ဟမ်မူရာဘီရဲ့  ကိုဓ ဥပဒေ ကျောက်စာတိုင်၊ မိုက်ကယ် အိန်ဂျလိုရဲ့  Dying Slave ရုပ်တု နှစ်ခုကို Museum ရောက်မှ အဲဒီမှာရှိမှန်းသိခဲ့ရတယ်။ Museum မှာရှိတဲ့ collection တွေကို အကုန်ဓါတ်ပုံလျှောက်ရိုက်နေရင် တနေ့တည်းနဲ့ မပြီးနိုင်ဘူး။ များလှတဲ့ ဒီပစ္စည်းတွေဟာ သူတို့ နိုင်ငံအတွက်တော့ တကယ့်ရတနာပုံပါပဲ။ နေ့စဉ်မပြတ်တဲ့ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်ပေါင်းများစွာဆီက ငွေတွေကို သဲ့ယူနေတာ ဒီပစ္စည်းတွေပါပဲ။ ခုပဲကြည့်ပါအုံး ကျွန်တော့်လို လူဆီက ငွေကိုတောင် ၁၇ ယူရို ယူသွားနိုင်သေးတယ်။ ကျွန်တော်ရဲ့ ၀ါသနာကလည်း အဲဒီအဟောင်းအမြင်းတွေကို ကြည့်ချင်တယ် နောက်ပြီး Museum တစ်ခုရောက်ရင် အဲဒီက ပစ္စည်းအစုံရဲ့  ဓါတ်ပုံ အချက်အလက်တွေလိုချင်တယ်။ အဲဒါတွေ စုထားချင်တယ်။
ဗီးနပ်စ် ရဲ့  သုံးဖက်မြင်အလှ
ဒါလည်း Louvre Museum က ကျောက်သားရုပ်တုတစ်ခုပါပဲ။
လီယိုနာဒို ဒါဗင်ချီနဲ့ ခေတ်ပြိုင် အီတလီ ကျောက်ဆစ်ပန်းပုနဲ့ ပန်းချီကျော် မိုက်ကယ်အိန်ဂျလိုရဲ့ Dying slave ဆိုတဲ့ ကျောက်ရုပ်တု။ စိန့်ပီတာက ပီယေတာရုပ်တုလောက်မကောင်းသလိုပဲ။
နောက်သွားဖို့ လမ်းညွှန်ချင်တာက ဗာဆိုင်း နန်းတော် (Palace of Versiailles) ပါ။ ဘာရယ်မဟုတ် ရောက်တုန်းသွားချင်တာနဲ့ ရောက်သွားဖြစ်တယ်။ ၄ ဇုံထဲမှာ ရောက်နေပြီး ခရီးကလည်း ၅ ဇုံထဲမှာရှိတဲ့ Disney land ကနေ ၁ နာရီလောက်သွားရတာနဲ့ 1day ticket (1 to6zone) လက်မှတ်ကိုပဲ ၀ယ်လိုက်တော့တယ်။ နှစ်ယောက်စာ ယူရို၄၀ထုတ်လိုက်ရလို့ သူမတောင် မျက်နှာတွေပျက်လို့။ တကယ်တော့ Disney land ကို သွားချင်တာ သူမအလိုဆန္ဒပါ။ ကျွန်တော်က ဗာဆိုင်းသွားချင်တယ်။ ရထားသုံးဆင့် ချိန်းပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ Disney land ကနေ ဗာဆိုင်း ရောက်သွားတော့တာပါပဲ။ ဗာဆိုင်းနန်းတော်တွင်း တစ်နေ့တာ ၀င်ကြေးက တစ်ယောက်ကို ၁၅ ယူရိုလောက် ကုန်သွားတယ်။ ၀ါသနာအတိုင်း Collection တွေကို ပြထားတဲ့ ဓါတ်ပုံနဲ့ စာအုပ်တော့ ၈ ယူရို ပေးဝယ်ခဲ့မိတယ်။
ဗာဆိုင်းမှာလည်း မိန်းမစိုးများ ရှိလေသလား။
နေ့လည်စာတော့ ဥရောပမှာ ဈေးအသက်သာဆုံး Mcdonald မှာ အားလူးချောင်းကြော်၊ Cheese Burger ရေတပုလင်းတို့နဲ့ ပြီးလိုက်ကြတယ်။ ဒါတောင် ဈေးက ဂျာမနီထက် နှစ်ဆလောက်ပိုကြီးနေတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး နည်းနည်းအစားကြီးသူတွေမို့ ၁၃ ယူရိုလောက်တော့ လျှောသွားတယ်။ ဒါတောင်လမ်းမှာ ဟမ်းဘွဂ် က သယ်လာတဲ့ ယိုသွတ် ပေါင်မုန့် နှစ်ချောင်းက ဗိုက်ထဲက ဘယ်ချောင်သွားကပ်လည်းမသိဘူး။ လေးရက်တာ နေ့လည်စာ ညစာ အများစု ကိုတော့ ဟိုတယ်နားက တရုတ်စာ ဂျပန်စာ ဆိုင်မှာပဲ ပြန်ပြန်စားဖြစ်ကြတယ်။ ဟင်းလက်ရာကတော့ ဂျာမနီမှာ ကျွန်တော်စားဖူးတဲ့ အာရှဆိုင်က အစာတွေထက်သာတယ်။ ရောင်းပုံက ထူးဆန်းတယ်။ ဟင်းတွေ ထမင်းတွေ ထမင်းကြော်တွေကို ၁၀၀ ဂရမ် ကို ၁.၈ ယူရို၊ ၁.၆ ယူရို စသည်ဖြင့် ရောင်းတယ်။ ထမင်းကြော် ၁၀၀ ဂရမ်က ၁ ယူရိုတဲ့။ ဟင်းအမယ်ပေါင်း ၂၆ မျိုးလောက်ကို ကြိုတင်ချက်ထားပြီး မှာလိုက်တာနဲ့ ပလတ်စတစ်ဗူးလေးထဲထည့်ပြီး မိုက်ခရိုဝေ့ဗ်နဲ့ နွှေးပေးတယ်။ ဒီဆိုင်က ဟိုတယ်နောက် တလမ်းမှာ ရှိတာမို့ အစားငမ်းတဲ့ ကျွန်တော် ဟန်ကျနေတော့တာပါပဲ။ Breakfast ကိုတော့ ဟိုတယ်ကို ၇ ယူရိုပေးမစားတော့ဘူး။ ရေနွေးအိုးယူသွားပြီး ရယ်ဒီမိတ် ခေါက်ဆွဲဘူး အထုပ်တွေလေးရက်စာ ၈ ခု ယူသွားတယ်။ နှစ်ယောက်ပုံတွေ ရိုက်ဖို့ ကင်မရာတင်တဲ့စင် ကလည်း ၁ ကီလိုကျော်ကျော်လောက် လေးတဲ့အပြင်၊ Wireless ရတယ်ဆိုတာနဲ့ အွန်လိုင်းဂိမ်းဆော့တာ မစွန့်လွှတ်နိုင်တဲ့ ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် ကွန်ပျူတာသယ်သွားခဲ့ကြတယ်။ ဓါတ်ပုံမှာ ဖက်ရှင်အမျိုးမျိုး နဲ့ ရိုက်ချင်တဲ့ သူမအတွက် ဖိနပ်အပိုတွေ၊ မင်းတောင် လုပ်တာ ငါလည်း ဘယ်ရမလဲ မခံချင်စိတ်နဲ့ ဖိနပ်အပို အနွေးထည် အပိုတွေ ယူသွားမိတဲ့ ကျွန်တော် ကိုယ့်ဒုက္ခ ကိုယ်ရှာသလိုပါပဲ။ ၂၅ ကီလိုလောက်လေးတဲ့ အိတ်ကြီးကို ရထားအတက်အဆင်းမှာ ချလိုက်ရတာ။ တကယ်တော့ အ၀တ်အစား ဘောင်းဘီ နှစ်စုံလောက်နဲ့ အနွေးထည်တစုံလောက်စုံ အိုကေမှာပါ။ ဂျာမနီမှာ ဆီးနှင်းဖုံးနေတဲ့ အချိန် ပဲရစ်မှာ နေသာတဲ့ အချိန်တွေပါပဲ။ ပြန်လာတော့လည်း ဂျာမနီမှာ ဆီးနှင်းတွေ ဖုံးလျှက်ပါပဲ။ ပဲရစ် တမြို့ လုံးဟာ ကမ္ဘာ့ခရီးသွားတွေ ငွေကို ချူမယ့်နေရာတွေချည်းပါပဲ။ ဖြုန်းချင်လောက်အောင်လည်း တန်ပါရဲ့ ။ ဒုတိယ အကြီးဆုံး အင်ပါယာကို တည်ထောင်နိုင်ခဲ့သူတွေပီပီ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်က ရှေးဟောင်း အမွေအနှစ်တွေကို သူတို့ပြတိုက်တွေထဲမှာ စုစည်းထားနိုင်ခဲ့တယ်။ ဒါတွေဟာ နေ့စဉ် ၀င်လာမစဲတသဲသဲ ငွေတွေပါပဲ။ ခေတ်ရှေ့ပြေးတဲ့သူတွေပီပီ လှပဆန်းပြားတဲ့ အဆောက်အအုံတွေနဲ့ ခေတ်ဟောင်းအမွေအနှစ်တွေ ပေါင်းတဲ့ အခါ လူတွေကို လာချင်အောင်စွဲဆောင်တော့တာပေါ့။ တဖက်ကလည်း မီဒီယာတွေကနေတဆင့် သူတို့ ခေတ်ဟောင်းပညာရှင်တွေရဲ့  လက်ရာတွေကို ကြေငြာခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ပဲရစ်မှာ လေးရက်ကြာခဲ့တယ်။ ဒီခရီးစဉ်ကို Lab ခန်းမှာ ခေါင်းမဖော်နိုင်အောင် ကျွန်တော် အလုပ်ရှုပ်နေစဉ် အတွင်း ၅ လခန့်လောက်ကတည်းက လေယဉ်လက်မှတ် သူမကြိုတင်စီစဉ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။ လည်ပတ်ဖို့ အစီအစဉ်တာဝန်လောက်ပဲ ကျွန်တော်ယူခဲ့တယ်။ သွားခါနီး တစ်လလောက် ကြိုတင်စဉ်းစားပြင်ဆင်ခဲ့တယ်။ လူခံမရှိသမို့ တိုတောင်းတဲ့ ၄ ရက်တာအတွင်း လည်မယ့်နေရာတွေ Monuments တွေ ပြတိုက်တွေ ဆင်းရမယ့် ဘူတာတွေ အားလုံးကြိုစီစဉ်ခဲ့ကြတယ်။3ညအထက်တည်းရင် ဈေးလျှော့တာ ရထားလက်မှတ်ဈေးလျှော့ဖို့ လည်မယ့် နေရာ ဇုံတွေအတွင်းမှာ တည်းခိုမယ့် ဟိုတယ်ရှိတာ စသည်ဖြင့် ပြင်ဆင်ခဲ့ကြတယ်။ မသွားခင် ကိုယ်သွားလည်မယ့် နေရာအကြောင်းကို ကြိုသိဖို့ စာတွေပြန်ဖတ်ခဲ့ကြတယ်။ ပြတိုက်တွေကို စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကျွန်တော် သမိုင်းအဖြစ်အပျက်တချို့  နဲ့ ပဲရစ် Monuments များကို ကိုသိဖို့ ဒီဝက်ဆိုဒ်တွေကို အားကိုးခဲ့တယ်။
(Ref: http://www.parisdigest.com, http://www.ratp.info)
Posted by မင်းညို at 12:54 PM
ပဲရစ်ကိုတူးတော့ ပဲမြစ်တွေ တွေ့ခဲ့သေးလား အစ်ကို...:P :P
ခုလို ဗဟုသုတတွေ မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါဗျာ...ကျွန်တော်သွားခဲ့တုန်းကတော့ ခါးပိုက်နှိုက် မကြုံခဲ့ဘူးဗျ...Disney Land ကပုံတွေပါ ကြည့်ခွင့် ရမယ်ဆိုရင် ပုံတွေနဲ့ တကွ ကြည့်ချင်ပါသေးတယ်ဗျာ...
ဦးမင်းညိုနဲ့ အန်တီမဟာဆန် ပျောက်နေတယ်ထင်တာ ခုတော့ ပဲရစ်ကိုတူးဖော်နေတာကိုး။
နေ့ လည်စာ အာလူးချောင်းကြော်နဲ့ရေဘဲဆိုလို့ မဆီဆိုင် စိတ်ပူလိုက်သေးတယ်။ ထမင်းလောက် ဘယ်ဗိုက်ပြည့်ပါ့မလဲနော်။
နောက်ထပ်တူးဖော်မယ့် ပဲရစ်ကို စောင့်နေတယ်နော်။
ပန်းပုတွေ က လက်ရာမြောက်လှပါတယ်...
အထူးသဖြင့် ဗီးနပ်(စ်) ပေါ့...
We also went to Versiaille on that Sunday. But we asked and bought ticket @ Station China Town for the route Olymphiad (may be wrong spelling )- Versiaille-Olymphiad and it's cost only 12 Euro for 2. Next time, you can buy like that
ပြင်သစ်သွားတဲ့ အဖိုးအဖွားကြီး လင်မယားလည်း ခါးပိုက်နိုက်ခံ ရတယ်။ ခါးပိုက်နိုက်က အုပ်စု နဲ့ ။ အဲဒီအုပ်စု ဆင်းခါနီး နိုက်ခိုးထားတဲ့ အဖွားကြီး ပိုက်ဆံအိတ်ထဲက မှတ်ပုံတင် ကို ပြန်ပေးပြီးမှ တအုပ်စုလုံး ဆင်းသွားသတဲ့ ခါးပိုက်နိက် တွေကိုအဖွားကြီးကပြန် ကျေးဇူး တင်ခဲ့ရတယ်
မရောက်ဖူးသေးဘူး။ အဖေါ်ကောင်းလေးတွေ စောင့်နေတာ။ အခုတော့ ပုံတွေကြည့်၊စာတွေဖတ်သွားပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
လွန်ခဲ့တဲ့ ၂ နှစ်လောက်က အမေရိကမှာနေတဲ့ မြန်မာဦးဇင်းတပါးလည်း ပါရီမြို့လယ်က မီးပွိုင့်မှာ အိတ်လုပြေးတာ ခံရလို့ အကုန်ပါသွားပါလေရော...